जादुगरहरु, जादूगरहरु, दासीहरु, पिशाच, जहाजहरु र बिरालोको बच्चाहरु को विविध | वर्तमान साहित्य
जादुगर, जादूगर, दासी, भ्याम्पायर, जहाज र बिरालाको बच्चाहरूको मिसिनलानी
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | हास्य, काल्पनिक, नोभेला, कालो उपन्यास, धेरै
डिसेम्बर पहिले नै। अर्को वर्ष सकियो। त्यसैले आज एक छोटो छुनुहोस् विविध उनले साहित्यिक क्षेत्रमा आफैंले के दिएका बारे समीक्षा सहित। म मेरो सबैभन्दा प्रत्याशित एक को पनि घोषणा गर्दछु समाचार २०१ 2019 को र मैले केही टिप्पणी गरेको छु वर्षगाँठ। सबै कालो, हास्य र साहित्य र सिनेमा मा अधिक समकालीन घटना जस्तै विधा को रूप मा फरक ह्यारी पॉटर वा सागा गोधूलि। यस वर्षको ती आफैलाई भएको छ द हन्डमेड कथा र पछिल्लो बारेमा ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता वा को गाथा चुरोटहरूको खोजी। ल यसरी हामी गर्छौं।
1 त्यहाँ धेरै दासीहरू हुनेछन्
2 कुमाले र कुलेनको जन्मदिन छ
3 चुरोचो र पिशाच
4 ह्यारी क्वाबर्ट
5 इन्स्पेक्टर लियो Caldas फर्कने छ
6 जोन ब्ल्याकसैडसँग खेल्दै
त्यहाँ धेरै दासीहरू हुनेछन्
मार्गरेट एटवुड, प्रसिद्ध क्यानेडाली लेखक द हन्डमेड कथा, जुन १ 1985 XNUMX को हो, उनले भर्खरै घोषणा गरे कि उनले आफ्नो अन्त्य गरिरहेको छ उत्तरकथा। यसको प्रकाशनका लागि निर्धारित गरिएको छ सेप्टेम्बर २०२१। यो शीर्षक हुनेछ कसम र कथानक १red बर्ष पछि मुख्य पात्र, अफ्रेडको अन्तिम दृश्य पछि सेट गरिएको छ। नयाँ कथा फेरि बताइनेछ तीन महिला पात्रहरू.
घटनाहरू जुन भित्र भयो गिलियड, अमेरिकाले एटवुडले यसमा कल्पना गर्यो डिस्टोपिया, जसको टेलिभिजन शृapt्खलाको रूपान्तरण सम्पादकीय बराबर वा ठूलो हो। यो सामाजिक भएर पनि एक भएको छ आज सबैभन्दा vindictive नारीवाद को संदर्भ.
कुमाले र कुलेनको जन्मदिन छ
सब भन्दा प्रसिद्ध जादुगर र सबै भ्याम्पायर ... मानौं किशोर किशोरीहरू उनीहरूको वार्षिकोत्सवमा छन्। उनको श्रृंखला क्रमशः साहित्य र सिनेमा मा वर्षौं छ। उसका फ्यानहरू, सायद अब धेरै युवा होइन तर सधैं प्रशंसकहरू, भाग्यमा बढी हुन सक्दैनन्।
को विजार्ड JK राउवलिंगहरू पहिले नै लिन्छ 20 वर्ष हामीसँग स्प्यानिशमा र को एक विशेष संस्करण ह्यारी कुम्हार र दार्शनिकको ढुone्गा. तिनीहरू वास्तवमा हुन् यस पहिलो खण्डको चार संस्करणहरू चार Hogwarts घरहरु लाई समर्पित: ग्रिफिन्डोर, हफ्लपफ, राभेनक्लाव र स्लिथेरिन। तिनीहरू द्वारा चित्रण गरिएको छ लेवी पिनफोल्ड र यी प्रसिद्ध जादुई भ्रातृत्वको ईतिहासमा विशेष सामग्री समावेश गर्दछ।
र अर्को तर्फ एडवर्ड कुलेन र बेला हंस, का उपन्यासहरूमा अग्रणी जोडी स्टीफनी मेयर, किशोर साहित्य मा युग बनाउनेहरूको अर्को प्रकाशन घटना, भेट उनीहरूको सिनेमाई अनुहारको साथ १० बर्ष, रबर्ट प्याटिनसन र क्रिस्टन स्टीवर्ट को।
त्यसो भए ठूलो स्क्रिनमा फ्रान्चाइजीको निर्माता एक सुरु गरेको छ विशेष संस्करण त्यो दशौं वार्षिकोत्सवको स्मरण गर्दै मूल उपन्यास समावेश गर्दछ गोधूलि र इतिहासको नयाँ सुधार एक प्रस्तावना र epilogue सँगै, लेखक द्वारा पूरा।
चुरोचो र पिशाच
अर्को गाथा, यस पटक अमेरिकी लेखक डेबोरा हरकनेसको, भर्खर यस गत नोभेम्बरमा यसको टेलिभिजन अनुकूलनमा प्रकाश देखेको छ। यो १० वर्ष पुरानो हो किनभने Harkness संग आयो। चुरोटहरूको खोजी को कथा हो बोक्सी, पिशाच र वर्तमानका राक्षसहरू खोज्दै पाण्डुलिपि बनाउनु भयो र यसको उत्पत्तिको खुलासा गर्दा तिनीहरूलाई बनाउने समय मा फिर्ता यात्रा र तपाइँ प्रेम मा झर्ने बनाउन उनीहरु मध्ये।
सही शृ it्खला, यसले आफैंलाई देख्न दिन्छ र टेरेसा पाल्मर र म्याथ्यू गोड ताराहरू। यो सजिलैसँग भावनात्मक कारणहरूले गर्दा हामी सबैलाई चिन्नुहुन्छ र त्यो असाधारण र सुन्दर शहरमा बस्नुभएको छ अक्सफोर्ड। को पहिलो सत्र Cha अध्यायहरू जुन दोस्रो र तेस्रो शीर्षकहरूको प्रतीक्षा गर्दछ जुन त्रयी बनाउँछन्: रातको छाया y जीवनको पुस्तक.
अर्को ह्यारी। यसले यसको सिर्जनाकर्ता, स्विस माथि राख्यो जोल डिकर, जसले यस कथाको साथ तीन पटक (१ 1975 1998, १ 2008 XNUMX and र २०० XNUMX) मा सेट गरिएको प्रकाशन दृश्य खाए नोला केलरगनको हत्या, एक पन्ध्र वर्षको केटी।
अब, उही उत्पादक द हन्डमेड कथा प्रतिष्ठित फ्रान्सेली निर्देशक द्वारा निर्देशित टेलिभिजन गर्न अनुकूलन बनाएको छ जीन-जैक्स अन्नाउड (भालु, गुलाबको नाम)। यो टिभी भन्दा पनि कम कुनै प्रसिद्ध प्रख्यात अभिनेता द्वारा अभिनय गरिएको छ पैट्रिक डेम्स्से। ती दुबै कार्यकारी उत्पादकहरू हुन्। र मैले लगाएकोमा मेरो पहिलो प्रभाव यो हो कि हो धेरै वफादार अनुकूलन साहित्यिक मूल गर्न।
इन्स्पेक्टर लियो Caldas फर्कने छ
Vigo लेखक डोमिंगो भिलार, यसको पाठकहरूको लागि लामो प्रतीक्षा पछि, प्रकाशित गर्दछ मार्च6श्रृंखलाको उनको तेस्रो किस्त इन्स्पेक्टर लियो Caldas अभिनीत। अन्तिम जहाज (जसको अघिल्लो शीर्षक स्टोन क्रसहरू थियो) क्रमशः नौ र बाह्र बर्ष पछि आउँदछ डु the्गाको समुद्र तट (जसको फिल्म अनुकूलन २०१ 2015 मा बनेको थियो) र पानी आँखा.
भिगो ईस्टुरी, मैले भ्रमण गरेको र बीस वर्ष भन्दा बढी मेरो हृदय मा रहेको छ, एक पटक फेरि शान्त निरीक्षक को लागी एक नयाँ मामला को दृश्य हुनेछ कि देश देखि। यस पटक ऊaबाट एक भेट प्राप्त गर्दछ मानिस आफ्नी छोरीको अनुपस्थितिको बारेमा चिन्तित छ, जसले सप्ताहन्तको खाजाको लागि देखाएनन् वा सोमबार भिगो स्कूल अफ आर्ट्स र शिल्पमा आफ्नो कक्षामा उपस्थित भएन।
जोन ब्ल्याकसैडसँग खेल्दै
हास्य मा सबैभन्दा कठिन कालो बिल्लीको बच्चा यसले ढाँचामा उफ्रिन्छ र कन्सोलमा जानको लागि यसको कार्डबोर्ड र सेपिया र colors्गहरूमा ढाकिएको पृष्ठहरू छोड्दछ। हाम्रो के अभाव थियो ... किस्ट्रोकमा जोन ब्ल्याकसैडलाई सम्हाल्दै। पूर्व एन्थ्रोपोमोर्फिक बिरामी, निजी जासूस S० को दशकमा अमेरिकामा, उहाँ आफ्नो स्प्यानिश अभिभावकहरू बाहेक अरू कसैलाई पनि सम्हाल्नुहुन्न, जुआन्जो गार्निडो र जुआन डायज-क्यानालेस. तर उसले यसको लागि सोधेको थियो। हालका वर्षहरूमा सबै भन्दा राम्रो र सब भन्दा सफल हास्य श्रृंखलाको लागि।
ब्ल्याकस्याड: छाला अन्तर्गत को नाम हो भिडियो खेल जुन २०१ thanks मा आउनेछ धन्यवाद को लागी Pendulo स्टूडियो। र के देख्न सकिन्छ भनेर अनुसार, यो एक ग्राफिक साहसिक छ कि जस्तो राम्रो देखिन्छ र यसको मूल रूपमा विश्वासिलो। को लागी उपलब्ध हुनेछ प्लेस्टेशन,, Xbox एक, निन्टेन्डो स्विच, पीसी र म्याक.
हामी अझै 50० को दशकमा छौं र हामी जाँदै छौं न्यूयर्क। त्यहाँ जोन ब्ल्याकसैडले भाडामा लिएका छन् सोनिया डन। तपाईंले यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्नेछ उसको बुवा, एक साधारण बक्सि club क्लबको मालिक, झुण्डिएको अवस्थामा फेला पर्‍यो वर्षको लडाई भन्दा छिटो। र उसलाई पनि खोज्नुहोस् स्टार बक्सर, जो हराए उही रात।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » जादुगर, जादूगर, दासी, भ्याम्पायर, जहाज र बिरालाको बच्चाहरूको मिसिनलानी
मालेन्का रामोससँग अन्तर्वार्ता। द व्हिसपेररका लेखकलाई १० प्रश्नहरू
फिक्शन इन्स्पेक्टर पेटुनिया प्राडो डेल बोस्क कविताहरु संग्रह Llueve प्रकाशित।